Hayso sawiro badan oo ku saabsan iPhone oo doonaya in ay sawiro ka iPhone ah wareejiyo iPhoto maaraynta ama boos lacag la'aan ah ilaa iPhone? Dhab ahaantii degida photos labadaba Roll Camera iyo Photo Library ka iPhone in iPhoto waa mid aad u fudud. Halkan soo socda, waxaan soo bandhigi doonaa hab fudud oo degdeg ah si ay sawiro ka iPhone ah in iPhoto wareejiyo. Akhri si aad u barato sida loo hadafkaaga si fudud.
Wondershare TunesGo (Mac) waa aalad iPhone aan ku talinaynaa in ay u hagaagsan sawiro ka iPhone ah in iPhoto. In kastoo iPhoto kuu ogolaanaysaa inaad sawiro ka iPhone Camera Roll wareejiyo, ma aha sidaas anfacaya oo aan sawiro ka Photo Library iPhone bedeli karaa computer halka Wondershare TunesGo (Mac) si deg deg ah oo si sax ah u qaban kartaa sidii aad u. Waxaa si buuxda la jaan qaada Mac OS X Snow Leopard, Libaaxa, Mountain Libaaxa, Mavericks, Yosemite iyo El Capitan.
Tallaabada 1. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPhone aad Mac
Bareesada in cable USB in cable USB aad Mac ah oo sidoo kale xirmaan aad iPhone. Burcad Wondershare TunesGo (Mac) iyo waxaad ka arki kartaa waxa aad ogaadaa iPhone iyo muujiyaan info aasaasiga ah ee suuqa kala bilaabo. Software iPhone Tani waxay si buuxda u taageeraysaa ugu dambeeyay 5s iPhone iyo tusaalayaal kale oo ka weyn socda ee macruufka 9.
Tallaabada 2. photos Keenista ka iPhone in iPhoto
Laga soo bilaabo suuqa kala taag, waxaad ka arki kartaa "Sawirro" item. Waxaa Click to Muujin suuqa kala Photos ah. Laga soo bilaabo suuqa kala dabamariyay kor, waxaad arki kartaa in sawiro iPhone badbaadiyey ee 2 meelo: Camera Roll oo Photo Library. Dhinaca bidix, guji Roll Camera ama Library Photo si ay daaha ka dhan photos meeshan. Dooro photos oo guji "Dhoofinta" taas oo ah meesha ugu sareysa ee daaqadda. In sanduuqa wada hadal u muuqday, hesho meel aad ku badbaadin kuwaas dhoofiyo photos iPhone.
Dhinaca midig oo Wondershare TunesGo (Mac) uu furmo, waxa kale oo aad dooran kartaa albums oo sawir leh iyo wareejiyo ka iPhone in iPhoto. Ganaax album sawirka, midig u guji dooro "Dhoofinta".
Ka dib dhoofinta photos iPhone, waxaad isticmaali kartaa iPhoto aad Mac inay dajiyaan mid ka mid ah sawir aad Mac. Oo iPhoto iyo sawiradan, waxaad samayn kartaa albums sawir, astaysto taariikheed ee shakhsiga ah, slideshow iyo kaarka, iwm sameeyo Tani waa sida si ay u gudbiyaan sawiro iPhone in iPhoto. Iyo rakibidda Wondershare TunesGo (Mac), ee mustaqbalka, haddii loo baahdo, waxaad dajiyaan karaa iPhoto sawiro si iPhone iyo sidoo.
Halkan waa Video Tutorial ah inuu kaa caawiyo inaad Bedelka iPhone Photos in iPhoto:
Sida loo xaliyo dhibka Echo iPhone
> Resource > iPhone > Transfer Photos ka iPhone ah in iPhoto